Truecaller အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
11.70.6 for Android
ဒေါင်းလုပ် XAPK（52.9MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Truecaller: Phone Caller ID, Spam Blocking & Chat
မသိသောခေါ်ဆိုမှုများနှင့် spam calls & SMS မှကာကွယ်ခြင်း - Truecaller သည်လိမ်လည်မှုများ, Telemarketers နှင့်အခြားမလိုလားအပ်သောဖုန်းနံပါတ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်း။
Blocking & spam ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု:
SMS - telemarketers, scammarketers, လိမ်လည်မှု, လိမ်လည်မှု, အရောင်းအ0ယ်များကိုဖော်ထုတ်ပါ။ ■ SPAM စာရင်းကိုကမ္ဘာတစ်လွှားရှိသန်းနှင့်ချီသောလူသန်းပေါင်းများစွာကအဆင့်မြှင့်တင်ရန်■အလားတူဖုန်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက်အဆင့်မြင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းရွေးချယ်စရာများ, နံပါတ်ပာနှင့်အခြား!
■မသိသော, မသိသော spam သို့မဟုတ် telemarketing sms များကိုအလိုအလျောက်ခွဲခြား သတ်မှတ်. ပိတ်ဆို့ပါ။ ■သင်၏ SMS အတွက်အလိုအလျောက်ဖွဲ့စည်းသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ, အရေးကြီးသည့်အခြားနှင့် spam
■မည်သူခေါ်ဆိုနေသည်ကိုပြသသည့် ဦး ဆောင်ဖုန်းခေါ်ဆိုသူမှတ်ပုံတင်အက်ပလီကေးရှင်းကိုအလိုအလျောက်ခေါ်ဆိုပါ။ ■ caller ID ကိုမသိသောဟုတ်မဟုတ်သင့်ကိုပြောပြလိမ့်မည် Caller သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ် spam ဖြစ်သည်။ ■ Trueecaller ရှိသင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောရန်အသံခေါ်ဆိုမှုကိုသုံးပါ။
Trueecaller သည် Uploa မတင်ပါ ၎င်းကိုအများပြည်သူရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်သင့်ဖုန်းစာအုပ်ကိုပြုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သုံးစွဲသူသန်း 270 ကျော်ကယုံကြည်စိတ်ချရပြီးသင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုပိုမိုလုံခြုံအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
တုံ့ပြန်ချက်ရတယ်? [email protected] သို့ရေးရန်သို့မဟုတ် http://truecaller.com/support သို့သွားပါ
ဘာအသစ်လဲ Truecaller: Phone Caller ID, Spam Blocking & Chat 11.70.6
Truecaller Phone Caller ID Spam Blocking Chat App
VIP PW TECH HD
Truecaller caller: phone caller ID; spam Blocking & chat
Truecaller Block Settings | Truecaller Block Settings for android
Truecaller: Caller ID, SMS Spam blocks & payment
Truecaller: Phone Caller ID, Spam Blocking & Chat 11.69.6
Truecaller: Phone Caller ID, Spam Blocking & Chat 11.68.7